OTU ESI EDOZI NTINYE N'IME OTU VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Otu esi edozi ntinye n'ime otu VKontakte
Viber abughi otu n'ime mmemme kachasị amara maka ịgbanwe oku na ozi n'etiti ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa nile. Onye ozi ahụ nwere nsụgharị maka nyocha niile a ma ama. Ntinye nke nsụgharị ọ bụla nwere àgwà nke ya, yabụ ụfọdụ ndị ọrụ nwere ajụjụ gbasara mmejuputa usoro a. N'okpuru ebe a, anyị na-akọwa nhazi nke Viber na sistemụ arụmọrụ kachasị.
Nke mbụ, m ga-achọ ịdeba na software dị na ajụjụ bụ n'efu, na-enye maka ego nanị ụfọdụ ọdịnaya na ọrụ ndị ọzọ. Otu ihe kpatara nke a, o nweela nnukwu ewu ewu. Ugbu a, Viber nwere otu n'ime ọnọdụ ndị isi n'etiti ndị ozi ngwa ngwa ma kwadoro na ọtụtụ usoro eji arụ ọrụ. Ka anyị leba anya na atọ kacha ewu ewu.
Viber maka windo
Ee, Viber na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na Windows, ma ọ gaghị ekwe omume ịdebanye aha site na nke a, ị ga-ebu ụzọ wụnye ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka. N'ihi nke a, enwere ihe isi ike ụfọdụ maka ndị na-enweghị ohere na smartphone. N'okwu a, ị ga - eji emulator pụrụ iche na nọmba ekwentị ịmepụta akaụntụ. Ntuziaka zuru ezu maka ụzọ niile nke wụnye Weiber na kọmputa nwere ike ịchọta na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Otu esi arụnye Viber na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ
Viber maka gam akporo
Ngwaọrụ Viber maka gam akporo bụ naanị otu usoro - site na Ụlọ Ahịa Google. Anyị enweghị ike ịkwado iji ihe onwunwe ndị ọzọ iji budata ngwa, n'ihi na enwere ike ibunye ngwaọrụ ahụ na faịlụ ọjọọ. Ọbụna ọbụrụ na anyị na-eche na e kesara ihe omume a n'efu, mkpa maka isi ndị ọzọ na-apụ n'anya. Debe usoro nrụnye akọwapụtara na ihe ndị ọzọ anyị.
Gụkwuo: Ịwụnye Viber na gam akporo-smartphone
Viber maka iOS
Viber maka iPhone nwere ike ibudata site na ọrụ atọ. Na nke ọ bụla n'ime ha, usoro a dịtụ iche, onye ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ ụfọdụ. N'ozuzu, ọ dịghị ihe siri ike na nke a, ma ọ bụrụ na i rube isi na ntuziaka ma mee nke ọ bụla nke ọma. Ntuziaka zuru ezu maka ịwụnye Weiber site na iTunes, iTools ma ọ bụ Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa nwere ike ịchọta na njikọ na-esonụ, nke edepụtara n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Olee otú iji wụnye Viber ozi na iPhone
Na nke a, isiokwu anyị na-abịa na njedebe. N'elu elu, anyị akọwachawo usoro nhazi nke onye ozi Viber maka atọ kachasị arụ ọrụ. Naanị ị ga-ahọrọ ntụziaka kwesịrị ekwesị maka onwe gị, kpebie usoro ahụ ma soro ntuziaka enyere. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ihe ịga nke ọma ma ị ga-enwe ike ịgbanwe na iji onye ozi ahụ.
Tinye kọntaktsị na Viber maka gam akporo, iOS na Windows
Esi edebanye aha na Viber na Android-smartphone, iPhone na PC
Esi melite Viber na ngwa gam akporo ma ọ bụ iPhone